ဖန်ဆင်းခြင်းကနေသမ်မာကမျြး Timeline ကိုသမိုင်းယနေ့တွင်မှ
ကမျြးစာကိုအားလုံးအချိန်အကြီးမားဆုံးအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖြစ်သတင်းပို့, နှင့်၎င်း၏သမိုင်းကိုလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကမျြးစာ၏စာရေးဆရာများအပေါ်မှုတ်အဖြစ်သူတို့အချိန်တွင်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်သမျှသယံဇာတရင်းမြစ်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ရွှံ့ပေါ်တွင်ကျောက်စာများတွင်အက္ခရာ တင်. : အဆိုပါသမ်မာကမျြးသူ့ဟာသူအသုံးပြုသောပစ္စည်းများအချို့သရုပ်ဖော် ကျောက်တက်ဘလက်များ , မှင်နှင့်ကျူစက္ကူ, vellum, ခေပျြမြား, သားရေများနှင့်သတ္ထု။
ဤသည်အချိန်ဇယားချအသက်အရွယ်ကနေတဆင့်သမ္မာကျမ်းစာရဲ့သူမတူနိုင်တဲ့သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဝီရိယစိုက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်တိုးချဲ့ကာလအဘို့အပင်နှိမ်နင်းထံမှ၎င်း၏ရှည်လျားခက်ခဲကြမ်းတမ်းခရီးစဉ်အတွင်းထားပြီးမည်ကဲ့သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိ ဖန်ဆင်းခြင်း နေ့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုတင်ပြရန်။
ကမျြးစာကို Timeline ကိုသမိုင်း
ဖန်ဆင်းခြင်း - ဘီစီ 2000 - မူလ, အစောဆုံးကမျြးစာကိုနှုတ်မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်ဆင်းပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
ခန့်ဘီစီ 2000-1500 - အ ယောဘ၏စာအုပ် , သမ္မာကျမ်းစာ၏ဖြစ်ကောင်းရှေးအကျဆုံးစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်ဘီစီ 1500-1400 - ၏အဆိုပါကျောက်ပြား ပညတ်တော်ဆယ်ပါး မှပေးအပ်ထားတယ် မောရှေသည် သိနာတောင်ပေါ်မှာနောက်ပိုင်းတွင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ။
ခန့်ဘီစီ 1400-400 - မူရင်းဟီဘရူးသမ်မာကမျြး (39 ဓမ်မဟောငျးကမျြးစာအုပျမြား) ပါဝင်သောအဆိုပါစာမူပြီးစီးခဲ့နေကြသည်။ ပညတ်တရား၏စာအုပ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်း ရာတဲတော် နှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်အနားမှာဗိမာန်တော်၌ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ။
ခန့်ဘီစီ 300 - မူလဓမ်မဟောငျးကမျြးဟီဘရူးစာအုပ်တွေအားလုံး, စာဖြင့်ရေးသားစုဆောင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးက, canonical စာအုပ်တွေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ခန့်ဘီစီ 250-200 - အဆိုပါပျတှားဂငျြ့ , ဟီဘရူးသမ်မာကမျြး (39 ဓမ်မဟောငျးကမျြးစာအုပျမြား) ၏လူကြိုက်များဂရိ, ဘာသာပြန်ချက်, ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၏ 14 စာအုပ်တွေကို Apocrypha ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။
ခန့်အေဒီ 45-100 - ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်း၏မူရင်း 27 စာအုပ်တွေကိုရေးထားလျက်ရှိ၏။
ခန့်အေဒီ 140-150 - Sinope ရဲ့အယူမှား "ဓမ္မသစ်ကျမ်း" ၏ Marcion သတိပေးခံရ သြသဒေါက် တစ်ဓမ္မသစ်ကျမ်း canon တည်ထောင်ရန်ခရစ်ယာန်တွေဟာ။
ခန့်အေဒီ 200 - ဂျူး မစ်ရှ်နာ ခြင်း, ခံတွင်းရာကျမ်း, ပထမဦးဆုံးမှတျတမျးတငျထားဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်အေဒီ 240 - သြရီဂျင် Hexapla, ဂရိနှင့်ဟီဘရူးကျမ်းတစ်ခြောက်လုံး-column အပြိုင် compiles ။
ခန့်အေဒီ 305-310 - Lucian ရဲ့အန္တိအုတ်မြို့သို့၏ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်းစာသား Textus Receptus များအတွက်အခြေခံဖြစ်လာသည်။
ခန့်အေဒီ 312 - Codex တီများကအမိန့်ကမျြးစာ၏မူလ 50 မိတ္တူအကြားဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ် ဧကရာဇ်ကွန် ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာရောမမြို့မှာရှိတဲ့ဗာတီကန်စာကြည့်တိုက်အတွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အေဒီ 367 - Athanasius လက်ဇန္ဒြီးယား၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အပြည့်စုံဓမ္မသစ်ကျမ်း canon (27 စာအုပ်တွေကို) သတ်မှတ်။
အေဒီ 382-384 - စိန့်ဂျရုမ်း Latin သို့မူရင်းဂရိကနေဓမ္မသစ်ကျမ်းဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဤဘာသာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် လက်တင်ဗားဂိ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အေဒီ 397 - ကားသေ့ချြ၏တတိယ Synod ဓမ္မသစ်ကျမ်း canon (27 စာအုပ်များ) ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အေဒီ 390-405 - စိန့်ဂျရုမ်း Latin သို့ဟီဘရူးကမျြးစာကိုဘာသာနှင့်လက်တင်ဗားလ်ဂိတ်စာမူကိုပြီးဆုံး။ ဒါဟာ 39 ဓမ်မဟောငျးကမျြးစာအုပျမြား, 27 ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ, နှင့် 14 Apocrypha စာအုပ်တွေပါဝင်သည်။
အေဒီ 500 - တစ်ယခုအားဖြင့်ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာစကားမျိုးစုံသို့ဘာသာပြန်ထားသောပြီမှကန့်သတ်မရပေမယ့်အီဂျစ်ဗားရှင်း (Codex Alexandrinus) အပါအဝင် Coptic အဘိဓါန် ဗားရှင်းတစ်ခု Ethiopic, ဘာသာပြန်ချက်, တစ်ဦး Gothic အဘိဓါန်ဗားရှင်း (Codex Argentus) နှင့်တစ်ဦးဘာသာစကား Armenian ဗားရှင်း။ တချို့ကမနေီအားလုံးရှေးခေတ်ဘာသာပြန်ချက်များကို၏အလှဆုံးနဲ့တိကျမှန်ကန်ဖြစ်စဉ်းစားပါ။
အေဒီ 600 - အ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း ကျမ်းစာ၌များအတွက်တစ်ခုတည်းသောဘာသာစကားအဖြစ်လက်တင်မိန့်တော်မူ၏။
အေဒီ 680 - Caedmon, အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာနှင့် သံဃာတော်များ သို့သမ်မာကမျြးစာအုပ်များနှင့်ပုံပြင်များပြန်ဆို Anglo-Saxon ကဗျာနှင့်သီချင်း။
အေဒီ 735 - Bede, အင်္ဂလိပ်သမိုင်းပညာရှင်နှင့်သံဃာတော်များ, ထိုဘာသာ ဝငျကမျြး Anglo-Saxon သို့။
အေဒီ 775 - အ Kells ၏စာအုပ် , ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်အခြားရေးသားခင်တစ်ဦးကြွယ်ဝစွာအလှဆင်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်, အိုင်ယာလန်အတွက်ဆဲလ်တစ်ဘုန်းတော်ကြီးများအားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ခန့်အေဒီ 865 - သူတော်စင်စိရယျလျနှင့် Methodius ဟောငျးဘုရားကျောင်း Slavonic သို့ကမျြးစာကိုဘာသာပြန်ဆိုစတင်ဖို့။
အေဒီ 950 - အ Lindisfarne ခရစ်ဝင်ကျမ်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Old English သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်အေဒီ 995-1010 - Aelfric, အင်္ဂလိပ်ဆရာတော်, Old English သို့သမ္မာကျမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဘာသာပြန်ပေးသည်။
အေဒီ 1205 - စတီဖင် Langton, ဘာသာရေးပါမောက္ခများနှင့်ကန်အကြာတွင်ဂိုဏ်းချုပ်, သမ္မာကျမ်းစာ၏စာအုပ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအခနျးတှငျကွဲပြားခြင်းဖန်တီးပေးပါတယ်။
အေဒီ 1229 - Toulouse ၏ကောင်စီတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ပြီးကမျြးစာကိုပိုင်ဆိုင်ထံမှ Lay ကလူတားမြစ်ထား။
အေဒီ 1240 - စိန့်ချာ၏ပြင်သစ် Cardinal မင်းသား Hugh နေဆဲယနေ့တည်ရှိနေသောအခနျးကွီးကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးလက်တင်ကမျြးစာကိုထုတ်ဝေသည်။
အေဒီ 1325 - အင်္ဂလိပ်ရသေ့နှင့်ကဗျာဆရာ, ရစ်ချတ် Rolls က de Hampole နှင့်အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာဝီလီယံ Shoreham, အဘာသာပြန်ဆို ဆာလံကျမ်း မက်ထရစ်ကျမ်းပိုဒ်သို့။
ခန့်အေဒီ 1330 - အရှင်ဘုရားသည်ရှောလမုန် ben အစ်ရှ်မေးလ်ပထမဦးဆုံးဟီဘရူးကျမ်းစာမာဂျင်အခန်းကွဲပြားခြင်းနေရာ။
အေဒီ 1381-1382 - ယောဟနျသဝီ နှင့်အပေါင်းအသင်း, အဖွဲ့စည်းဘုရားကျောင်း၏ဖီဆန်အတွက်လူတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခွင့်သင့်ကြောင်းယုံကြည်, အင်္ဂလိပ်အတွက်တစ်ခုလုံးကိုသမ်မာကမျြး၏ပထမဦးဆုံးလက်ရေးစာမူဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်စတင်။ ဤ 39 ဓမ်မဟောငျးကမျြးစာအုပျမြား, 27 ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ, နှင့် 14 Apocrypha စာအုပ်တွေပါဝင်သည်။
အေဒီ 1388 - ယောဟန် Purvey ဝီရဲ့ကမျြးစာကို revises ။
အေဒီ 1415 - ဝီရဲ့သေသောနောက် 31 နှစ်, Constance ၏ကောင်စီကျော် 260 ရေတွက်နှငျ့အတူသူ့ကိုပညတ် ယူမှား ။
အေဒီ 1428 - ဝီရဲ့သေသောနောက် 44 နှစ်, ဘုရားကျောင်းအရာရှိများ, သူ၏အရိုးကိုတက်တူးသူတို့ကိုရှို့နှင့်ဆွစ်ဖ်မြစ်ပေါ်တွင်ပြာလွင့်စေ။
အေဒီ 1455 - ဂျာမနီရှိပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းများ၏တီထွင်မှုပြီးနောက် ဂျိုဟန်ဂူတင်ဘာ့ဂ် လက်တင်ဗားလ်ဂိတ်အတွင်းပထမဆုံးပုံနှိပ်သမ်မာကမျြး, အဂူတင်ဘာ့ဂ်သမ်မာကမျြး, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အေဒီ 1516 - Desiderius Erasmus ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်း, အ Textus Receptus မှရှေ့ပြေးထုတ်လုပ်သည်။
အေဒီ 1517 - ဒံယလေ Bomberg ရဲ့ရဗ်ဗိသမ်မာကမျြးအခနျးကွီးကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်ဟီဘရူးဗားရှင်း (Masoretic စာသားကို) ပါရှိသည်။
အေဒီ 1522 - မာတင်လူသာ ပု 1516 Erasmus ဗားရှင်းကနေဂြာမနျသို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းဘာသာနှင့်ထုတ်ဝေ။
အေဒီ 1524 - Bomberg ယာကုပ်အမျိုးကို ben Chayim အားဖြင့်ပြင်ဆင်ဒုတိယထုတ်ဝေ Masoretic စာသားကိုရိုက်ထုတ်။
အေဒီ 1525 - ဝီလျံတင်ဒေး English သို့ဂရိကနေဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်ချက်ထုတ်လုပ်သည်။
အေဒီ 1527 - Erasmus စတုတ္ထထုတ်ဝေအဘိဓါန်ဂရိလက်တင်ဘာသာပြန်ချက်ထုတ်ဝေသည်။
အေဒီ 1530 - Jacques Lefèvre d'Étaplesတစ်ခုလုံးကိုသမ်မာကမျြး၏ပထမဦးဆုံးပြင်သစ်ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်ပြီးဆုံး။
အေဒီ 1535 - Myles Coverdale ရဲ့ကမျြးစာကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာသမ်မာကမျြးပုံနှိပ်ပထမဦးဆုံးပြီးပြည့်စုံကိုထုတ်လုပ်တင်ဒေးရဲ့အလုပ်ပြီးဆုံး။ ဒါဟာ 39 ဓမ်မဟောငျးကမျြးစာအုပျမြား, 27 ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ, နှင့် 14 Apocrypha စာအုပ်တွေပါဝင်သည်။
အေဒီ 1536 - မာတင်လူသာဂြာမနျတွင်တစ်ခုလုံးကမျြးစာကသူ့ဘာသာပြန်ချက်ဖြည့်စွက်ခြင်း, ဂျာမန်လူမျိုး၏လေ့-ပြောပြီစကားစဓမ်မဟောငျးကမျြးဘာသာပြန်ပေးသည်။
အေဒီ 1536 - တင်ဒေးတစ်ယူမှားသူအဖြစ်အဖြစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလည်ပင်းညှစ်လျက်, ရှယ်ယာမှာမီးရှို့နေသည်။
အေဒီ 1537 - အဆိုပါမဿဲသမ်မာကမျြး (အများအားအဆိုပါမဿဲ-တင်ဒေးကမျြးစာကိုအဖြစ်လူသိများ), တစ်စက္ကန့်ပြည့်စုံပုံနှိပ်အင်္ဂလိပ်, ဘာသာပြန်ချက်, တင်ဒေး, Coverdale နှင့်ယောဟန်ရော်ဂျာ၏အကျင့်ပေါင်းစပ်ပြီး, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1539 - မဟာသမ်မာကမျြး, ပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအများပြည်သူအသုံးပြုရန်ခွင့်အာဏာ, ပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1546 - Trent ၏ရိုမန်ကက်သလစ်ကောင်စီကမျြးစာကိုများအတွက်သီးသန့်လက်တင်အခွင့်အာဏာအဖြစ်ဗျာဒိတ်မိန့်တော်မူ၏။
အေဒီ 1553 - ရောဘတ် Estienne မျြးအခနျးကွီးမြားနှငျ့ကျမ်းပိုဒ်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူပြင်သစ်ကမျြးစာကိုထုတ်ဝေသည်။ စာရငျးဒီစနစ်ကကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောဖြစ်လာသည်နှင့်နေဆဲယနေ့အများဆုံးကျမ်းစာရဲ့တွေ့ရပါသည်။
အေဒီ 1560 - အဆိုပါဂျီနီဗာကမျြးစာကိုဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်ဒုက္ခသည်များအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောနှင့်ထုတ်ဝေသောဖြစ်ပါတယ် ဂျွန်ကယ်လ်ဗင် 's အစ်ကို-In-ဥပဒေ, ဝီလျံ Whittingham ။ ဂျီနီဗာကျမ်းစာအခန်းကြီးမှရေတွက်ကျမ်းပိုဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ၏ကမျြးစာကိုဖြစ်လာ ပရိုတက်စတပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူရင်းဖြန့်ချိပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များအတွက် 1611 King James Version ထက်ပိုပြီးလူကြိုက်များ။
အေဒီ 1568 - အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့သမ္မာကျမ်းစာမဟာသမ်မာကမျြးတစ်တည်းဖြတ်မူသည်လူကြိုက်များပေမယ့် "ဟုအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဘုရားကျောင်းဆီသို့ရောင်ရမ်း" ဂျီနီဗာကျမ်းစာနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အင်္ဂလန်မှာစတင်မိတ်ဆက်သည်။
အေဒီ 1582 - က၎င်း၏ 1000 နှစ်အရွယ်သာလက်တင်မူဝါဒအကိုအဆုံးသတ်ခြင်း, ရောမမြို့များ၏ဘုရားကျောင်းလက်တင်ဗားလ်ဂိတ်ကနေပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ကက်သလစ်ကျမ်းစာသည် Rheims ဓမ္မသစ်ကျမ်း, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အေဒီ 1592 - (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Clementine VIII နေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်) က Clementine ဗားဂိ, လက်တင်ဗားလ်ဂိတ်တစ်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းများ၏သော authoritative သမ်မာကမျြးဖြစ်လာသည်။
အေဒီ 1609 - မွနျဓမ်မဟောငျးကမျြးအဆိုပါပေါင်းစပ်မြားအတှကျဗားရှင်းဖြည့်စွက်ရန်, ရောမအသင်းတော်အားဖြင့် English သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1611 - အဆိုပါ King James Version ကိုလည်းသမ်မာကမျြး၏ "Authorized ဗားရှင်း" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်ဟုခေါ်တွင်။ ဒါဟာပုံနှိပ်မီဒီယာများတွင်တစ်ဦးထက်ပိုဘီလီယံကိုမိတ္တူနှင့်အတူကမ္ဘာ၏သမိုင်းအတွက်အများဆုံးပုံနှိပ်စာအုပ်, ဖြစ်ဟုဆိုသည်။
အေဒီ 1663 - ယောဟန် Eliot ရဲ့ Algonquin အဘိဓါန်သမ်မာကမျြးမရအင်္ဂလိပ်လိုပေမယ့်ဇာတိ Algonquin အဘိဓါန်အိန္ဒိယဘာသာစကားမှာ, America မှာပုံနှိပ်ပထမဦးဆုံးကမျြးစာကဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1782 - ရောဘတ် Aitken ရဲ့ကမျြးစာအမရေိကပုံနှိပ်ပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (တဖန်) ကမျြးစာဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1790 - မဿဲကယ်ရီအမေရိကရှိတစ်ဦးရိုမန်ကက်သလစ်မြားအတှကျဗားရှင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထုတ်ဝေသည်။
အေဒီ 1790 - ဝီလျံ Young ကပထမဦးဆုံးအိတ်ကပ် America မှာ "ကြောငျးထုတ်ဝေ" King James Version ကမျြးစာကိုသုံးနိုင်နေရိုက်ထုတ်။
အေဒီ 1791 - အဆိုပါဣဇာက်သည် Collins ကမျြးစာသငျ, ပထမဦးဆုံးမိသားစုကျမ်းစာ (တည်း), America မှာပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1791 - ဟေရှာယသောမတ်စ်အမေရိကအတွက်ပထမပုံဥပမာကမျြးစာက (တဖန်) နေရိုက်ထုတ်။
အေဒီ 1808 - ဂျိန်း Aitken (ရောဘတ် Aitken ၏သမီး), ကမျြးစာပုံနှိပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1833 - နောဧကို Webster , မိမိနာမည်ကြီးအဘိဓါန်ထုတ်ဝေပြီးနောက်ဂျိမ်းဘုရင်ကမျြးစာကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောထုတ်ဝေဖြန့်ချိ။
အေဒီ 1841 - အင်္ဂလိပ် Hexapla ဓမ္မသစ်ကျမ်း, မူရင်းဂရိဘာသာစကားနှင့်ခြောက်လအရေးကြီးသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်, ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1844 - အဆိုပါ Codex Sinaiticus, အဟောငျးမြားနှငျ့ကျောစတုတ္ထရာစုမှချိန်းတွေ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကျမ်းနှစ်ဦးစလုံး၏လက်ကျမ်းစာ၌ရေးထား Koine ဂရိလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်, သိနာတောင်ပေါ်မှာစိန့်ကက်သရင်း၏ကျောင်းတိုက်အတွင်းဂျာမန်ကျမ်းပညာရှင် Konstantin Von Tischendorf ဖွငျ့ပွနျလညျရှာဖှတှေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီ 1881-1885 - အဂျိမ်းဘုရင်ကမျြးစာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်အင်္ဂလန်အတွက် Revised ဗားရှင်း (RV) အဖြစ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1901 - အမေရိကန် Standard Version, ဂျိမ်းဘုရင်ဗားရှင်း၏ပထမဦးဆုံးအဓိကအမေရိကန်တည်းဖြတ်မူ, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1946-1952 - အ Revised Standard Version ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1947-1956 - အဆိုပါ ပင်လယ်သေကျမ်းလိပ်များ ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်။
အေဒီ 1971 - The New American Standard Bible (NASB) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1973 - အဆိုပါ New International Version (တို့သည်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1982 - အဆိုပါ နယူး King James Version (NKJV) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 1986 - အစဉ်အဆက်ရှေးအကျဆုံးကျမ်းဖြစ်ယုံကြည်သောသူ Silver, ကျမ်းလိပ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ကြေညာခဲ့သည်။ သူတို့ကတဲလ်အဗစ်တက္ကသိုလ်မှဂါဗြေလ Barkay အားဖြင့်သုံးနှစ်ကြာအစောပိုင်းကဂျေရုဆလင်များ၏ဟောငျးစီးတီးရှိတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အေဒီ 1996 - အဆိုပါ နယူးနေထိုင်မှုဘာသာပြန်စာပေ (NLT) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
အေဒီ 2001 - အဆိုပါ အင်္ဂလိပ် Standard Version (တော်မူ၏) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
သတင်းရင်းမြစ်: Willmington ရဲ့ကမျြးစာကိုလက်စွဲစာအုပ်; www.greatsite.com; Crossway; ကမျြးစာကိုပြတိုက်; Biblica; ခရစ်ယာန်ဘာသာယနေ့တွင်; နှင့် Theopedia ။
ယရှေုသညျအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေယာဣရု '' သမီး (မာကု 5: 35-43)
ယောန 3: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
မာကု၏အဆိုအရအဆိုပါဝငျကမျြးအခနျး 10 ခု
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းသမ်မာကမျြး Software များ
အားလုံးအချိန် 20 အကြီးမြတ်ဆုံးဂရမ်မီဆုပေးပွဲဖျော်ဖြေ
2015 မာစတာ: ဂျော်ဒန် Spieth ကြေးနန်း-to-ကြေးနန်းသွား
Milcha Sanchez-ဖြစ်သူ Scott အားဖြင့် "ဒီကျူးဘားရေကူး," တစ် Play ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
ပိုယ်က y Gretel: ဝေါဟာရသင်ခန်းစာများနှင့်အတူစပိန်ကလေးများပုံပြင်
Active ကိုကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်တွေမှာ Passive ကိုယ်ခံစွမ်းအားတစ်ခုနိဒါန်း
$ 50 လက်အောက်တွင်အဆိုတော်များများအတွက်လက်ဆောင်များ
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စနစ်အတွက်အဓိကကျောင်းခွဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
အကြောင်း 'သင်တို့သည်ငါ၏မိခင်ဖြစ်ပါသလား " PD Eastman အားဖြင့်
Group မှသရုပ်ြပဇာတ်ရုံဂိမ်း "ဤတွင်ကျနော်တို့ကလာပါ"
အဆိုပါ Bodhisattva ရဲ့တစ်ထောင်လက်နက်
Lepenski Vir - ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံအတွက် Mesolithic ကျေးရွာ
Zakat: အစ္စလာမ့် Almsgiving ၏ကုသိုလ်ဖြစ်အလေ့အကျင့်
သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ခင်မှာလေ့လာပါမှ7နောက်ထပ်စေ့ဆော် Quotes
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ဗိုလ်မှူးကြီးအထွေထွေ Heinz Guderian
"ကလပ် Fight" Quotes
10th (သို့မဟုတ် 11) အဆင့်စာဖတ်ခြင်းစာရင်း: အမေရိကန်စာပေ